Sakan'ny mpanoratra WordPress miaraka amin'ny Google Analytics
Alatsinainy 8 Febroary 2010 Alahady 24 aprily 2016 Douglas Karr
Nanoratra lahatsoratra iray hafa momba ny fanarahana mpanoratra maro amin'ny WordPress miaraka amin'ny Google Analytics aho taloha, fa diso hevitra! Ivelan'ny WordPress Loop dia tsy azonao atao ny maka ny anaran'ny mpanoratra ka tsy mandeha ny kaody.
Miala tsiny amin'ny tsy fahombiazana.
Nahavita fihady fanampiny aho ary hitako ny fomba fanaovana azy io marani-tsaina kokoa amin'ny mombamomba ny Google Analytics. (Tsotra tokoa - rehefa lasa tia matihanina ianao Analytics fonosana toa Webtrends!)
Dingana 1: Manampia mombamomba ny Domain efa misy
Ny dingana voalohany dia ny manampy profil fanampiny amin'ny fonenanao ankehitriny. Safidy tsy fantatry ny ankamaroan'ny olona io fa miasa tanteraka amin'ity karazana scenario ity.
Dingana 2: Manampia sivana ampidiro ao amin'ny mombamomba ny mpanoratra vaovao
Ianao irery ihany no mila refesina amin'ny fomba fijerin'ny mpanoratra ny fanarahana an'ity profil ity, koa asio sivana ho an'ilay subdirectory / Mpanoratra /. Fanamarihana iray momba izany - tsy maintsy nataoko hoe "izay misy" ho mpandraharaha. Ny torolalan'i Google dia miantso ny ^ alohan'ny fampirimana. Raha ny marina dia tsy afaka manoratra an ^ any an-tsaha ianao!
Dingana 3: Manampia sivana tsy manilika ny mombamomba anao voalohany
Tsy te-hanaraka ny fizarana pejy fanampiny rehetra ataon'ny mpanoratra ao amin'ny mombamomba anao tany am-boalohany ianao, koa ampio sivana amin'ny mombamomba anao tany am-boalohany hanilihana ny subdirectory / By-mpanoratra /.
Dingana 4: Manampia Loop ao amin'ny Script Footer
Ao anatin'ny fanarahan-dia Google Analytics misy anao sy ambanin'ilay tsipika trackPageView misy anao izao, ampio ity fika manaraka ity ao amin'ny rakitra lohahevitry ny tongotrao:
var authorTracker = _gat._getTracker ("UA-xxxxxxxx-x"); authorTracker._trackPageview ( "/ by-mpanoratra / ");
Ity dia hisambotra ny fanarahan-dia rehetra anao, amin'ny alàlan'ny mpanoratra, amin'ny profil faharoa ho an'ny fonenanao. Amin'ny fanilihana an'ity fanarahan-dia ity amin'ny mombamomba anao voalohany, ianao dia tsy manampy fomba fijery tsy ilaina fanampiny. Ataovy ao an-tsaina fa raha manana pejy fandraisana misy hafatra 6 ianao dia hanaraka fijerena pejy 6 miaraka amin'ity kaody ity - iray isaky ny lahatsoratra, arahan'ny mpanoratra.
Toy izao no hijeren'ny Tracking ny mpanoratra ao amin'io mombamomba azy manokana io:
Raha nahavita izany tamin'ny fomba hafa ianao dia misokatra amin'ny fomba fanampiny hanarahana ny mombamomba ny mpanoratra aho! Satria ny fidiram-bolako Adsense dia mifandraika amin'ilay mombamomba azy, dia hitako mihitsy aza hoe iza amin'ireo mpanoratra no manome ny karam-barotra be indrindra :).
Tags: mpanoratrafanarahana mpanoratraGoogle Analytics
Afaka mamely volamena amin'ny Facebook ve ireo mpivarotra?
8 Mey 2010 tamin'ny 3:16 hariva
Lahatsoratra tsara Doug! Ny safidy hafa hanarahana ireo Mpanoratra amin'ity ambaratonga ity dia ny fanarahana hetsika amin'ny GA. Azonao atao ny manisa ny isan'ny impiry isaky ny asan'ny mpanoratra nojerena, amin'ny mombamomba anao mitovy amin'ny angon-drakitra mahazatra anao, nefa tsy mampirongatra ny pejy. Azonao atao ihany koa ny mampiasa refy marobe amin'ny tatitra momba ny Hetsika hahitanao hoe loharano inona no nahatonga ny mpitsidika ny mpanoratra isan-karazany (oh: iza no misarika ny mpamaky indrindra amin'ny alàlan'ny Twitter), avy aiza izy ireo, sns. Nanandrana nametraka ilay script aho, fa izaho nihoatra ny fetran'ny toetra. Ity ny rohy: http://www.wheresitworking.com/2010/02/08/tracking-authors-in-wordpress-with-google-analytics-event-tracking/
10 Feb 2010 tamin'ny 8:50 maraina
Doug, toa mametraka ny toerana mety foana ianao amin'ny fotoana mety, hampihariko ao amin'ny bilaoginay Indiana Insider (http://www.VisitIndiana.com/blog/) anio!
Mar 6, 2010 amin'ny 2: 19 AM
Mahafinaritra, misaotra tamin'ny fizarana ity Doug! Hitako fa ny_author () dia mila soloina get_the_author () mba hisorohana ny fanoratana ny anaran'ny mpanoratra sy ny famoahana azy indroa.
Ary koa, ahoana ny fampitahana ny vahaolana amin'ny an'i Adama?
27 Jan 2011 amin'ny 7:32 PM
Doug, nanandrana nampihatra an'io aho, saingy ny fijerena ireo pejin'ny mpanoratra ihany no zahana (… / mpanoratra / AUTHORNAME), fa tsy ny fomba fijerin'ny lahatsoratra tsirairay nojerena, nosarahan'ny mpanoratra - misy eritreritra?
27 Jan 2011 amin'ny 7:42 PM
Ny fomba fampiharana azy dia ny fampiasana kaonty roa samy hafa ao amin'ny Google Analytics (kaody UA misaraka). Miantso ny kaonty iray aho hoe "Mpanoratra" ary ny iray kosa tazomiko ho tranonkala iray manontolo. Misy dikany?
27 Jan 2011 amin'ny 7:46 PM
Oh, kaody UA roa misaraka tanteraka? Vao avy nametraka profil vaovao teo ambanin'ny kaody bilaogy UA aho. Homeko tifitra iray izy ary hampahafantariko anao raha mety amiko izany.
Jun 25, 2012 ao amin'ny 2: 15 PM
Misaotra betsaka. Andramako izao. Zavatra iray na izany aza, nesoriko ilay "akony" tao anaty tadivavarana satria toa mandika ny anaran'ny mpanoratra izy io. Ohatra, ny mpanoratra iray / Mpanoratra Mpanoratra Mpanoratra dia niseho niaraka tamin'ny akony.
12 Okt 2014 amin'ny 4:23 PM
Misaotra tamin'ny fampianarana. Mila manara-maso ireo fijeriko pejy aho isaky ny mpanoratra ao amin'ny bilaogy iray vaovao manangona mba handoavana azy ireo amin'ny fomba fijery.
Tsy tena mandeha anefa ny fampidirana ny pejy fandraisana.
Azonao atao ve ny manilika kaody avy amin'ny pejy fandraisana? Raha tsy tafiditra ao anaty lay-pejy tokana (safidy amin'ny pejin-tranonkala namboarina) ity kaody ity, mety ve izany? manilika ny fomba fijerin'ny pejy fandraisana amin'ny isa?
12 Okt 2014 amin'ny 4:49 PM
Nampiasa tokoa izahay Context.ly ho an'izay ary mandeha tsara.
May 16, 2015 ao amin'ny 8: 54 PM
Ahoana no ataonao amin'ny dingana 1 azafady: "ampio profil fanampiny amin'ny fonenanao ankehitriny"
Mampiseho ny fomba fanatanterahana ny dingana ianao, fa tsy ny fomba hahatongavana any amin'ny toerana voalohany.
May 17, 2015 ao amin'ny 9: 28 PM
Azon'izy ireo antoka fa tsy mora izany, ry Justin? Ity misy topy topy iray momba ny Google Analytics page.